एनआरएनएको महासचिवमा कांग्रेस भर्सेस कांग्रेस ! – Khabar Silo
२८ असोज, काठमाडौं । महिनौं अघिदेखि एनआरएनएको नवौं अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनमा महासचिव पदका उम्मेदवारहरुको चर्चा चल्यो । बेलायतका डा. हेमराज शर्मा, अमेरिकाबाट डा.केशव पौडेल, मध्यपुर्वका डम्बरबहादुर (डीबी) क्षेत्री र बेल्जियम निवासी व्यवसायी जानकी गुरुङको नाम चुनावको दुई दिन अघिसम्म महासचिवका लागि चर्चामा रह्यो ।
अन्ततः सोमबार अध्यक्षका प्रत्यासी कुल आचार्य समूहले जानकी गुरुङलाई महासचिवमा अघि सारेपछि चुनावी रोचकता झनै रोचक बनेको छ । किनभने, वामपन्थी प्यानलका अध्यक्ष कुमार पन्त समूहबाट उम्मेदवार बनेका डा. हेमराज शर्मा पनि प्रजातान्त्रिक विचारधारकै ठानिन्छन् भने जानकी गुरुङ पनि युरोपबाट कांग्रेसको राजनीतिमा सक्रिय छिन् ।
अर्थात्, यसपटक महासचिव पदका लागि मुख्य प्रतिस्पर्धा कांग्रेस भर्सेस कांग्रेसकै लडाइँ हुने देखिएको छ ।
आचार्य समूहलाई कांग्रेस निकटको आधिकारिक समूह ठानिएकाले पनि विदेशस्थित नेपाली जनसम्पर्क समितिहरुले गुरुङलाई नै भोट गर्न सर्कुलेशन गर्ने सुत्रको दाबी छ ।
तर, अर्का प्रत्यासी डा. शर्मा प्रजातान्त्रिक पृष्ठभूमिका भए पनि कुमार पन्तको टीमबाट महासचिवमा उठेकाले उनले कम्युनिस्ट समर्थकको भोट तान्ने निश्चित छ ।
अर्कोतर्फ जानकी गुरुङ महिला र आदिवासी–जनजाति समुदायकी भएकाले महिला र जनजातिको भोट उनले आकर्षित गर्न सक्ने विश्लेषण उनी निकटस्थहरुको छ ।
महासचिवमा तीनजना आकांक्षी भएकाले सहमति जुटाउन आचार्य समूह अप्ठ्यारोमा थियो । तर, महासचिवकै आकांक्षी डा. पौडेल उपाध्यक्षमा चुनाव लड्न तयार भएसँगै आचार्य समूहलाई केही राहत मिलेको देखिन्छ । तर, मध्यपूर्वका डीबी क्षेत्रीको नाम आचार्य समूहसँग जोडिँदै आएको भए पनि उनी सोमबार आचार्य समूहको पत्रकार सम्मेलनमा देखिएनन् ।
अहिलेसम्म एनआरएनएको महासचिवका लागि दाबी गरिरहेका तीन जनाको संक्षिप्त विवरण यस्तो छ:
डा. हेमराज शर्मा (बेलायत)
बेलायतस्थित लिभरपुल विश्वविद्यालयमा भौतिकशास्त्रका प्राध्यापक डा.शर्मा एनआरएनए अभियानमा नछुट्ने नाम हो । डेढ दशक लामो संघको अभियानमा कुनै न कुनै रुपमा उनको भूमिका महत्वपूर्ण रहँदै आएको छ ।
डा. शर्मासँग बेलायतको लोकप्रिय विश्वविद्यालय लिभरपुलमा सिनियर रिसर्च लेक्चरको अनुभव छ । सन् १९९७ मा उनले जापानको रिक्यो विश्वविद्यालयमा मास्टर्स कोर्ष गरेका थिए । सन् १९९८ मा इटालीबाट थप मास्टर्स डिग्री हासिल गरे । डा. शर्माले सन् २००२ मा फ्री युनिभर्सिटी बर्लिनबाट ‘फिजिक्स’ मै पीएचडी गरे ।
डा. शर्मा पूर्वअध्यक्ष जीवा लामिछानेका घनिष्ठ मित्र हुन् । लामिछाने अध्यक्ष हुँदा उनी संघका प्रवक्ता थिए ।
अध्यक्षका प्रत्यासी पन्तले आफ्नो कार्यसमितिमा बौद्विक महासचिव खोजी गरेकाले शर्मा पहिलो रोजाइमा परेका हुन् । नेकपा निकटकै उम्मेदवारलाई महासचिव बनाउन पन्तलाई दबाव आए पनि उनले त्यसलाई इन्कार गर्दै डा. शर्मालाई रोजेका छन् ।
डा. शर्मासँग गैरआवासीय नेपाली संघ जापानको महासचिव, दुई कार्यकाल अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको सदस्य र प्रवक्ता हुँदै विगत तीन कार्यकाल संघको सल्लाहकारमा रहेर काम गरेको अनुभव छ ।
गत वर्ष सम्पन्न एनआरएनको प्रथम विश्व विज्ञ सम्मेलनको संयोजन पनि शर्माले नै गरेका थिए ।
सबैको एनआरएनए, सबल र बहुआयामिक एनआरएनए, स्मार्ट एनआरएनए, परिणाममुखी एनआरएनए, दीगो एनआरएनए, सीप, ज्ञान र नवप्रवर्द्धनका लागि एनआरएन तथा उत्तरदायी र पारदर्शी एनआरएनए भन्दै शर्माले सात निर्देशक सिद्वान्त अघि सारेका छन् ।
जानकी गुरुङ (बेल्जियम)
दुई दशकदेखि बेल्जियममा बस्दै आएकी व्यवसायी जानकी गुरुङ एनआरएनए अभियानमा सक्रिय महिला अभियन्ताका रुपमा परिचित छिन् ।
सन् २००५ देखि अभियानमा सक्रिय गुरुङले एनआरएनए बेल्जियमको नेतृत्वसमेत सम्हालिसकेकी छिन् । उनी दुई पटकसम्म आइसीसी सदस्य र युरोप उपसंयोजक हुँदै हाल केन्द्रीय सचिवको जिम्मेवारीमा छिन् ।
आठौँ अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनमा जमुना गुरुङ समूहबाट सचिवमा चुनाव जितेकी उनी सो समूहबाट एकमात्र विजयी उम्मेदवार हुन् ।
यसपालि महासचिव पदमा गुरुङ बिजयी हुने उनी निकट स्रोतको दाबी छ । आदिवासी जनजातिहरुको समर्थन, महिला नेतृ अनि जनसम्पर्क समिति सम्वद्व एनआरएन प्रतिनिधिहरुको समर्थन रहेकाले उनी विजयी बन्ने दाबी गुरुङ निकट सुत्रको छ । तथापि वौद्धिक व्यक्तित्वसँगको गुरुङको प्रतिस्पर्धा निकै नै चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ ।
डम्बरबहादुर (डीबी) क्षेत्री ,ओमान
एनआरएनएमा हजारे अभियान ल्याएकाले पनि डीबी क्षेत्री निकै चर्चित छन् । एनसीसी ओमानको दुई कार्यकालको अध्यक्ष, मध्यपूर्व क्षेत्रीय संयोजक हुँदै उनी गत अधिवेशनबाट केन्द्रीय सचिव पदमा निर्वाचित भएका हुन् ।
मध्यपूर्वलाई सधैं चुनावी अभियान बनाउने तर त्यहाँको प्रतिनिधित्वलाई नेतृत्वले पाखा लगाउँदै आएको दृष्टान्त एनआरएन इतिहासमा देखिन्छ । अहिले पनि त्यही परम्पराले नै निरन्तरता पाएको छ । अर्थात वर्तमान सचिवसमेत रहेका क्षेत्री अन्ततः दुवै टिमको रोजाइमा परेनन् ।
यद्यपि आचार्य समूहले उनलाई अन्य पदमा उठ्न लविङ गरिरहेको सुत्रहरुको दाबी छ ।
कुनै समूहको समर्थनविना नै मुख्य पदमा एनआरएनएको चुनाव जित्न लगभग असम्भव जस्तै छ । पन्त समूहवाट शर्मा र आचार्य समूहबाट गुरुङ आउने भएपछि मध्यपूर्वका नेता क्षेत्री अहिले दोधारमा देखिन्छन् ।
महासचिवमा नै उम्मेदवारी दिने वा अन्य पदका लागि चुनाव लड्नेबारे अनलाइनखबरको जिज्ञासामा उनले कुनै प्रतिक्रिया दिएनन् ।
भिडन्त त्रिपक्षीय होला कि द्विपक्षीय ?
अब डीबी क्षेत्रीले पनि महासचिवमै उम्मेदवारी दिए के होला ? वा नदिँदा चुनावी नतिजामा के फेरबदल हुन सक्ला ? यसबारे एनआरएन वृत्तमा अड्कलबाजीहरु सुरु भएका छन् ।
राजनीतिकरुपमा भने क्षेत्री नेकपा निकट ठानिन्छन् । उनको उम्मेदवारी परेमा मध्यपूर्व र पूर्वमाओवादी निकटस्थ प्रतिनिधिहरुको मत उनले बटुल्ने सुत्रको दाबी छ । यसले पन्त समूहका महासचिवका उम्मेदवार शर्मालाई धक्का लाग्न सक्छ भने गुरुङलाई फाइदा पुग्ने विश्लेषण प्रतिनिधिहरुले गरेका छन् ।
तर, क्षेत्रीले महासचिवमा उम्मेदवारी नदिएमा नेकपा निकटका प्रतिनिधिहरुको मत पन्त प्यानलमा रहेका डा. शर्मातर्फ सोझिने सम्भावना बढ्छ ।
तर, क्षेत्री महासचिवमा उठेमा उनलाई जिताउन सम्पूर्ण नेकपा निकट प्रतिनिधिहरु एक हुने प्रवासी नेपाली एकता मञ्चनिकट प्रतिनिधिहरुको दाबी छ ।
क्षेत्रीको सबल पक्ष के हो भने महासचिवका अन्य दुबैजना (शर्मा र गुरुङ) दाबेदारहरु कांग्रेस निकट हुन् र तीन प्रतिस्पर्धीमध्ये उनी एकमात्र प्रत्याशी हुन् ।
त्यसैगरी एनआरएनएमा मध्यपूर्व भर्सेस युरोप–अमेरिका जस्तो स्थिति देखिएका बेला क्षेत्रीले मध्यपूर्वका प्रतिनिधिहरुको सहानुभूति आफूतिर केन्द्रित गर्न सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै देखिन्छ ।
महासचिवमा द्विपक्षीय वा त्रिपक्षीय भिडन्त के होला ? त्यो त भोलि हुने उम्मेदवार मनोनयन दर्ता प्रक्रियापछि नै थाहा हुनेछ ।
एनआरएनएको चुनावमा पूर्वअध्यक्षहरुले कसलाई समर्थन जनाउँछन् भन्ने विषयले पनि महत्व राख्ने गर्दछ । महासचिव पदका लागि पूर्वअध्यक्ष समूहको मत बाँडिने प्रायः निश्चित छ । पूर्वअध्यक्ष जीवा लामिछाने डा.शर्मालाई जिताउन र पूर्वअध्यक्ष शेष घले गुरुङलाई जिताउन लागि पर्ने अनुमान गैरआवासीयहरुले गरेका छन् ।
पूर्व अध्यक्ष घलेले भने महासचिवका प्रत्यासी डा.शर्मालाई खासै रुचाउँदैनन् । घलेको कार्यकालमा विभिन्न मुद्दाहरुमा डा.शर्माले सार्वजनिकरुपमै खुलेर आलोचना गरेका थिए ।
अर्का पूर्वअध्यक्ष उपेन्द्र महतोले महासचिवलाई कसलाई समर्थन गर्छन् भन्ने प्रष्ट खुलेको छैन ।
झन बढ्यो ओली र प्रचण्डको दुरी, नेकपामा भाँडभैलो
काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू लक्षित अभिव्यक्ति दिएपछि नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल शनिबार दिउँसो सिन्धुपाल्चोकको झुले उक्लिए । परिवारका सदस्य, निजी सचिवालय, सुरक्षाकर्मीसहित झुले गएका दाहालसँग नेकपा स्थायी समिति सदस्य अग्नि सापकोटा पनि थिए ।शनिबार मध्याह्नदेखि आइतबार बिहानसम्म उतै बसेका अध्यक्ष दाहाल फर्किएपछि प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्न बालुवाटार पुगे, करिब २ घण्टा त्यहीँ अलमलिए । […]
छोराको सहयोगका लागि भौतारिरहेका जनगायक जीवन शर्मालाई प्रधानमन्त्री ओलीले भेटे
काठमाडौं। जनगायक जीवन शर्माका छोरा अमृतको स्वास्थ्यबारेमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चासो देखाएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले शनिबार गायक शर्मालाई प्रधानमन्त्री निवासमा भेटेर उनका छोराको स्वास्थ्यस्थिति र व्यक्तिगत कुराकानी गरेका हुन्। प्रधानमन्त्रीको सद्भावप्रति आफूले धन्यवाद दिएको गायक शर्माले बताए। उनले यस्तै समस्यामा पर्ने जो कोही नागरिकले रकम अभावमा उपचार नपाउने स्थिति सिर्जना हुन नदिन नीतिगत व्यवस्थासहित […]
काठमाडौं । कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा भएको भनिएको १० अर्ब रुपैयाँको खर्च विवरण सार्वजनिक गर्न काठमाडौं उपत्यकासहित बिभिन्न जिल्लामा प्रदर्शन भएपछि सरकारले खर्च विवरण सार्वजनिक गरेको छ । सीसीएमसी निर्देशन समितिको निर्णयअनुसार खर्च विवरण सार्वजनिक गरिएको हो । १० अर्ब खर्च भएको चर्चा चलिरहे पनि तीनै तहबाट हालसम्म ८ अर्ब ३९ करोड ११ लाख […]
केकीले भनिन्- अब फिल्ममा अभिनय गरिरहन सकिन्न !